Inkqubo yoLawulo lweeKhemesti kunye neBiotech -Shanghai BOQU Instrument Co., Ltd.
Ulawulo lweNkqubo yoKhemesti kunye neBiotech
Umgangatho wamanzi, ukungaguquguquki kunye nokuthembeka yimicimbi ebalulekileyo kulo naliphi na iziko lophando lwe-biopharmaceutical, abantu ababandakanyeka kwi-bioproduction, ukufumanisa iziyobisi okanye iindawo ezinxulumene noko. Izixhobo ze-BOQU yinkokeli kunye nomzi mveliso omkhulu kumhlalutyi womgangatho wamanzi kunye nesenzi senzululwazi yekhemesti kunye ne-biotech e-China, njengengcali yokujonga umgangatho wamanzi, sinokujongana nayo nayiphi na imibuzo kunye neenkxalabo.
Amanzi asisiseko, kodwa yenye yezona zinto zisetyenziswayo kushishino lwamayeza. Ngokwesiqhelo, amanzi ayenziwa njenge-excipient, okanye asetyenziselwa ukwenziwa ngokutsha kweemveliso, ngexesha lokudityaniswa, ngexesha lokuveliswa kwemveliso egqityiweyo, okanye njengearhente yokucoca yokuhlanjwa kweenqanawa, izixhobo kunye nezinto zokuqala zokupakisha, njl. Isicelo sebhayoloji, iintlobo ezininzi zahlulwe: Amanzi acocekileyo, Amanzi okuTofa, Amanzi eHemodialysis, Amanzi angcolileyo, Amanzi acocekileyo, Amanzi acocekileyo ngenaliti, Amanzi eBacteriostatic ngenaliti, Amanzi angenanzala okunkcenkceshela, Amanzi acocekileyo okuphefumla.
Kwikhemesti kunye nenkqubo yolawulo lwe-biotech, i-BOQU liqabane lakho elithembekileyo. Sinokubonelela ngesisombululo esikhawulezileyo nesobuchule semibuzo yakho ecaleni kwakho. Mhlawumbi uya kubuza: ngoba? Ngenxa yokuba i-BOQU yakha ilebhu yokuqala yokushisa okuphezulu kwe-pH, i-ORP, ukuqhuba kunye nokuchithwa kwenjini yeoksijini, ikwangowona mveliso mkhulu eTshayina. Iwaranti ye-VBQ series yiminyaka emithathu. Apha ngezantsi kukho itafile yokuthelekisa yeMETTLER TOLEDO kunye neHAMILTON.
Thelekisa itafile neMETTLER TOLEDO kunye neHAMILTON pH Sensor
Ukusetyenziswa kobushushu be-pH woluvo
pH5806 uthotho METTLER TOLEDO
InPro3250 uthotho IHAMILTON
Uthotho lwe-EASYFERM Plus
Iifayile Ukuchaneka okuphezulu
Ilungele imeko engqongqo
Isinxibelelanisi: VP / K8S / S8 / wire lead Ukuchaneka okuphezulu
Isinxibelelanisi: VP / K8S / S8 Ukuchaneka okuphezulu
Isinxibelelanisi: VP / K8S / S8
Ukusetyenziswa Itanki yokuvumba
Itekhnoloji yokutya nesiselo
Iphepha, isitashi somgubo, ukunyibilikisa ipetroleum, njl. Itanki yokuvumba
Itheyibhile yokuthelekisa neMETTLER TOLEDO kunye neHAMILTON yokuchithwa kweSensor yeSensor
12 okanye 25
I-VP / T82D4
Ukusetyenziswa Ubushushu High ichithwe Oxygen woluvo
INJA-208FA METTLER TOLEDO
Isinxibelelanisi: VP Ukuchaneka okuphezulu
Isinxibelelanisi: VP / T82D4
Ukutya nesiselo, njl Itanki yokuvumba
Ukutya nesiselo, njl